ရေအလုံအလောက်မသောက်ဘဲ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လျှင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဖြစ်ပျက်လာမယ့်အရာတွေ - Lifestyle Myanmar
Home Health & Beauty ရေအလုံအလောက်မသောက်ဘဲ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လျှင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဖြစ်ပျက်လာမယ့်အရာတွေ
ရေအလုံအလောက်မသောက်ဘဲ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လျှင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဖြစ်ပျက်လာမယ့်အရာတွေ
လူအတော်များများက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးနောက်နှင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ် ရေသောက်တာက မကောင်းဘူးလို့ ထင်ကြပါတယ်။ သို့သော် သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အားကစားသမားတွေက အပြန်အလှန် ထင်ကြပါတယ်။သင်သည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လိုအပ်တဲ့အစိုဓါတ်ကို မဆုံးရှုံးသင့်ပါဘူး။ ရေမသောက်လျှင်၊ ၎င်းရဲ့အချက်ပြမှုများကို လျစ်လျူရှုလျှင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာတွေဖြစ်ပျက်မလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးပါမယ်။
၁။ အသားအရေ အိုမင်းခြင်းမှ ကူညီပေးပါတယ်
ဒါက အားကစားတွေဟာ သင့်အသားအပေါ် ပြန်လည်နုပျိုခြင်း အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိတယ်ဆိုတာ သက်သေပြနေပါတယ်။ အရေပြားရဲ့သွေးစီးဆင်းမှု ဆဲလ်တွေဟာ အောက်ဆီဂျင်ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်း၊ ကော်လာဂျင် ထုတ်လုပ်မှု တိုးမြင့်ခြင်း နှင့် အရေးအကြောင်းတွေကို သေးငယ်စေတဲ့ အကျိုးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်သည် သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်ကို ကောင်းစေဖို့ အရည်ရဲ့ မှန်ကန်တဲ့ ပမာဏ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရေသောက်ပေးသင့်ပါတယ်။
၂။ အဆီမဟုတ်ဘဲ ရေဆုံးရှုံးပါတယ်
တစ်ချို့လူတွေက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ် ရေမသောက်တာဟာ ကိုယ်အလေးချိန်ကို မြန်မြန်ကျစေတယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးနောက် သင့်ရဲ့အတိုင်းအတာပေါ်မှာ အကျိုးသက်ရောက်မှု တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အဆီပိုတွေ ဆုံးရှုံးသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ရေဆုံးရှုံးသွားတာပါ။ အတိုင်းအတာထိ မသောက်ရင် မကြာခင်မှာ ခြားနားတဲ့ ရလဒ်ကို ပြသပါလိမ့်မယ်။
ရေဓါတ်ကင်းမဲ့ခြင်းက အဆီဆဲလ်တွေကို ထိထိရောက်ရောက် မခြေဖျက်နိုင်ပါဘူး။ ရေပြတ်လပ်မှုကြောင့် အောင်ဆီဂျင်နှင့် ဆဲလ်တွေက ပုံမှန်သွေးလည်ပတ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
၃။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အဆိပ်အတောက်တွေနေပါတယ်
ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ်အတွင်း ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်က အရေပြားသွေးစီးဆင်းမှုနှင့် ချွေးအများကြီးထွက်ခြင်းမှတဆင့် အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ရေအလုံလောက် မထောက်ပံ့ပေးလျှင် ချွေးမထွက်ဘဲ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အဆိပ်အတောက်တွေ နေပါလိမ့်မယ်။
၄။ လေ့ကျင့်ခန်း ထိရောက်မှု လျော့နည်းပါတယ်
သိပ္ပံပညာရှင်များက ရေဓါတ်ခန်းခြောက်ရင် လေ့ကျင့်ခန်းထိရောက်မှုအပေါ် ဆိုးဝါးတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိတယ်လို့ စဉ်းစားကြပါတယ်။ သင်သည် အရည် 5%ဆုံးရှုံးလျှင် လေ့ကျင့်ခန်းထိရောက်မှု 30% လျော့ကျပါလိမ့်မယ်။ အရည် 2% ဆုံးရှုံးလျှင် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကြွက်သားကြီးထွားခွင့်နှင့် အဆီလောင်ကျွမ်းခွင့် မရှိဘူးလို့ ဆိုလိုပါတယ်။
၅။ ကြွက်သားနာကျင်မှုကို စတင်ကြုံရပါတယ်
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ကြွက်သားနာကျင်မှုတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ရေအလုံအလောက်မသောက်လျှင် ဒီနာကျင်မှုက နှစ်ရက်ထက်ပိုပြီး တာရှည်နေနိုင်ပါတယ်။
ကြွက်သားအမျှင်တွေက ပရိုတိန်းနဲ့ ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ရရှိလျှင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ်အတွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်တဲ့ Microtraumas ကိုသာ သက်သာစေပါတယ်။
Muscle sports injury of female runner thigh. Woman running muscle strain injury in thigh. Closeup of runner touching leg in muscle pain.
၆။ နှလုံးကို ၀န်ပိစေပါတယ်
သင့်ရဲ့သွေးက အရည်အလုံအလောက် မစားသုံးရလျှင် ပိုထူလာခြင်းနှင့် ရေပမာဏအကန့်အသတ်ကို ထိန်းသိန်းဖို့ သင့်သွေးကြောက တင်းကျပ်လာစေပါတယ်။ ရလဒ်အဖြစ် ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ သွေးကြောမှတဆင့် သွေးစီးဆင်းမှုထူလာအောင် နှလုံးက ကြိုးစားရတာကြောင့် နှလုံးက အလုပ်တိုးလာပါတယ်။
ဒါက အသက်ရှုမ၀ခြင်း၊ သွေးတိုးခြင်းနှင့် tachycardia ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သင်ကျန်းမာနေလျှင်တောင်၊ သင်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်နေရင်တောင် သင့်နှလုံးဟာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
၇။ ရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်ပွားစေပါတယ်
ဒါက ယုံကြည်မှုခက်ခဲပေမယ့် ရောင်ရမ်းခြင်းက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ်အတွင်း ရေအလုံအလောက်မသောက်လျှင် ပေါ်ပေါက်နိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် မျက်လုံးအောက်မှာ မျက်ကွင်းညိုတာလည်း ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။
၈။ အာရုံစူးစိုက်မှု လျော့နည်းခြင်းနှင့် မောပန်းခြင်း တိုးလာစေပါတယ်
အရည်ရဲ့ 1/2%ဆုံးရှုံးရင်တောင် သင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှု လျော့ကျလာပြီး တင်းမာမှုနှင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု တိုးလာစေပါတယ်။ အဆက်မပြတ် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ခံစားရခြင်းနှင့် မကောင်းတဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ တစ်ခါတရံ ရေဆာတာလား၊ ဗိုက်ဆာတာလားဆိုတာ မခွဲတတ်ပါဘူး။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ် ရေမသောက်လျှင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ရေဓါတ်လိုအပ်တာကြောင့် ဆာလောင်မှုခံစားရပါတယ်။ ပထမဆုံး ရေတစ်ဖန်ခွက်သောက်ပါ။ ဗိုက်ဆာနေဆဲပဲဆိုလျှင် အဆာပြေမုန့်တစ်ခု စားပါ။
15မိနစ်၊ မိနစ်20တိုင်း ရေပမာဏ 5-8 fl အောင်စ(၁၅၀- ၂၅၀မီလီ) ၀န်းကျင်သောက်ဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ အရာအားလုံးက လေ့ကျင့်ခန်းပြင်းထန်မှုအပေါ် မှုတည်ပါတယ်။
ရေ သို့မဟုတ် အားဖြည့်အချိုရည်
လေ့ကျင့်ခန်းအတိုလေးပဲ လုပ်မယ်ဆိုရင် ရေသောက်တာပဲ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂နာရီထက်ပိုပြီး လေ့ကျင့်လျှင် sports drink တစ်ခုခုရွေးချယ်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။
ရအေလုံအလောကျမသောကျဘဲ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျလြှငျ သငျ့ခန်ဓာကိုယျမှာ ဖွဈပကျြလာမယျ့အရာတှေ
လူအတျောမြားမြားက လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပွီးနောကျနှငျ့ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျနစေဉျ ရသေောကျတာက မကောငျးဘူးလို့ ထငျကွပါတယျ။ သို့သျော သိပ်ပံပညာရှငျမြားနှငျ့ ပရျောဖကျရှငျနယျ အားကစားသမားတှကေ အပွနျအလှနျ ထငျကွပါတယျ။သငျသညျ သငျ့ခန်ဓာကိုယျရဲ့ လိုအပျတဲ့အစိုဓါတျကို မဆုံးရှုံးသငျ့ပါဘူး။ ရမေသောကျလြှငျ၊ ၎င်းငျးရဲ့အခကျြပွမှုမြားကို လဈြလြူရှုလြှငျ သငျ့ခန်ဓာကိုယျမှာ ဘာတှဖွေဈပကျြမလဲဆိုတာကို ပွောပွပေးပါမယျ။
၁။ အသားအရေ အိုမငျးခွငျးမှ ကူညီပေးပါတယျ
ဒါက အားကစားတှဟော သငျ့အသားအပျေါ ပွနျလညျနုပြိုခွငျး အကြိုးသကျရောကျမှု ရှိတယျဆိုတာ သကျသပွေနပေါတယျ။ အရပွေားရဲ့သှေးစီးဆငျးမှု ဆဲလျတှဟော အောကျဆီဂငျြကွှယျဝပွညျ့စုံခွငျး၊ ကျောလာဂငျြ ထုတျလုပျမှု တိုးမွငျ့ခွငျး နှငျ့ အရေးအကွောငျးတှကေို သေးငယျစတေဲ့ အကြိုးရှိပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ခန်ဓာကိုယျသညျ သှေးလညျပတျမှုစနဈကို ကောငျးစဖေို့ အရညျရဲ့ မှနျကနျတဲ့ ပမာဏ လိုအပျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ရသေောကျပေးသငျ့ပါတယျ။
၂။ အဆီမဟုတျဘဲ ရဆေုံးရှုံးပါတယျ
တဈခြို့လူတှကေ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျနစေဉျ ရမေသောကျတာဟာ ကိုယျအလေးခြိနျကို မွနျမွနျကစြတေယျလို့ ထငျကွပါတယျ။ ဟုတျပါတယျ။ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပွီးနောကျ သငျ့ရဲ့အတိုငျးအတာပျေါမှာ အကြိုးသကျရောကျမှု တှမွေ့ငျရပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ အဆီပိုတှေ ဆုံးရှုံးသှားတာမဟုတျပါဘူး။ ရဆေုံးရှုံးသှားတာပါ။ အတိုငျးအတာထိ မသောကျရငျ မကွာခငျမှာ ခွားနားတဲ့ ရလဒျကို ပွသပါလိမျ့မယျ။
ရဓေါတျကငျးမဲ့ခွငျးက အဆီဆဲလျတှကေို ထိထိရောကျရောကျ မခွဖေကျြနိုငျပါဘူး။ ရပွေတျလပျမှုကွောငျ့ အောငျဆီဂငျြနှငျ့ ဆဲလျတှကေ ပုံမှနျသှေးလညျပတျဖို့ မဖွဈနိုငျပါဘူး။
၃။ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ အဆိပျအတောကျတှနေပေါတယျ
ကာယလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျနစေဉျအတှငျး ကြှနျတျောတို့ခန်ဓာကိုယျက အရပွေားသှေးစီးဆငျးမှုနှငျ့ ခြှေးအမြားကွီးထှကျခွငျးမှတဆငျ့ အဆိပျအတောကျတှကေို ဖယျရှားပေးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သငျ့ခန်ဓာကိုယျကို ရအေလုံလောကျ မထောကျပံ့ပေးလြှငျ ခြှေးမထှကျဘဲ သငျ့ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ အဆိပျအတောကျတှေ နပေါလိမျ့မယျ။
၄။ လကေ့ငျြ့ခနျး ထိရောကျမှု လြော့နညျးပါတယျ
သိပ်ပံပညာရှငျမြားက ရဓေါတျခနျးခွောကျရငျ လကေ့ငျြ့ခနျးထိရောကျမှုအပျေါ ဆိုးဝါးတဲ့ အကြိုးသကျရောကျမှု ရှိတယျလို့ စဉျးစားကွပါတယျ။ သငျသညျ အရညျ 5%ဆုံးရှုံးလြှငျ လကေ့ငျြ့ခနျးထိရောကျမှု 30% လြော့ကပြါလိမျ့မယျ။ အရညျ 2% ဆုံးရှုံးလြှငျ ခန်ဓာကိုယျမှာ ကွှကျသားကွီးထှားခှငျ့နှငျ့ အဆီလောငျကြှမျးခှငျ့ မရှိဘူးလို့ ဆိုလိုပါတယျ။
၅။ ကွှကျသားနာကငျြမှုကို စတငျကွုံရပါတယျ
လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပွီးနောကျပိုငျးမှာ ကွှကျသားနာကငျြမှုတှေ ရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သငျရအေလုံအလောကျမသောကျလြှငျ ဒီနာကငျြမှုက နှဈရကျထကျပိုပွီး တာရှညျနနေိုငျပါတယျ။
ကွှကျသားအမြှငျတှကေ ပရိုတိနျးနဲ့ ကာဘိုဟိုကျဒရိတျရရှိလြှငျ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျနစေဉျအတှငျးမှာ ဖွဈပျေါတဲ့ Microtraumas ကိုသာ သကျသာစပေါတယျ။
၆။ နှလုံးကို ဝနျပိစပေါတယျ
သငျ့ရဲ့သှေးက အရညျအလုံအလောကျ မစားသုံးရလြှငျ ပိုထူလာခွငျးနှငျ့ ရပေမာဏအကနျ့အသတျကို ထိနျးသိနျးဖို့ သငျ့သှေးကွောက တငျးကပျြလာစပေါတယျ။ ရလဒျအဖွဈ ကဉျြးမွောငျးတဲ့ သှေးကွောမှတဆငျ့ သှေးစီးဆငျးမှုထူလာအောငျ နှလုံးက ကွိုးစားရတာကွောငျ့ နှလုံးက အလုပျတိုးလာပါတယျ။
ဒါက အသကျရှုမဝခွငျး၊ သှေးတိုးခွငျးနှငျ့ tachycardia ကိုဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ သငျကနျြးမာနလြှေငျတောငျ၊ သငျပုံမှနျလကေ့ငျြ့ခနျးပွုလုပျနရေငျတောငျ သငျ့နှလုံးဟာ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ခံစားရပါလိမျ့မယျ။
၇။ ရောငျရမျးခွငျးကို ဖွဈပှားစပေါတယျ
ဒါက ယုံကွညျမှုခကျခဲပမေယျ့ ရောငျရမျးခွငျးက လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျနစေဉျအတှငျး ရအေလုံအလောကျမသောကျလြှငျ ပျေါပေါကျနိုငျဖှယျရှိပါတယျ။ ရောငျရမျးခွငျးနှငျ့ မကျြလုံးအောကျမှာ မကျြကှငျးညိုတာလညျး ဖွဈပျေါပါတယျ။
၈။ အာရုံစူးစိုကျမှု လြော့နညျးခွငျးနှငျ့ မောပနျးခွငျး တိုးလာစပေါတယျ
အရညျရဲ့ 1/2%ဆုံးရှုံးရငျတောငျ သငျ့ရဲ့အာရုံစူးစိုကျမှု လြော့ကလြာပွီး တငျးမာမှုနှငျ့ ပငျပနျးနှမျးနယျမှု တိုးလာစပေါတယျ။ အဆကျမပွတျ ပငျပနျးနှမျးနယျမှုကို ခံစားရခွငျးနှငျ့ မကောငျးတဲ့ စိတျခံစားခကျြကို ဖွဈပျေါစပေါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ဟာ တဈခါတရံ ရဆောတာလား၊ ဗိုကျဆာတာလားဆိုတာ မခှဲတတျပါဘူး။ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျနစေဉျ ရမေသောကျလြှငျ သငျ့ခန်ဓာကိုယျက ရဓေါတျလိုအပျတာကွောငျ့ ဆာလောငျမှုခံစားရပါတယျ။ ပထမဆုံး ရတေဈဖနျခှကျသောကျပါ။ ဗိုကျဆာနဆေဲပဲဆိုလြှငျ အဆာပွမေုနျ့တဈခု စားပါ။
15မိနဈ၊ မိနဈ20တိုငျး ရပေမာဏ 5-8 fl အောငျစ(၁၅၀- ၂၅ဝမီလီ) ဝနျးကငျြသောကျဖို့ အကွံပွုပါတယျ။ အရာအားလုံးက လကေ့ငျြ့ခနျးပွငျးထနျမှုအပျေါ မှုတညျပါတယျ။
ရေ သို့မဟုတျ အားဖွညျ့အခြိုရညျ
လကေ့ငျြ့ခနျးအတိုလေးပဲ လုပျမယျဆိုရငျ ရသေောကျတာပဲ ကောငျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ၂နာရီထကျပိုပွီး လကေ့ငျြ့လြှငျ sports drink တဈခုခုရှေးခယျြတာ ပိုကောငျးပါတယျ။
Previous articleဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ အိပ်မက် (၇) မျိုးနဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့နောက်ကွယ်က အဓိပ္ပာယ်
Next articleအိမ်ထောင်ကျပြီး အချို့ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ စိတ်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အမျိုးသမီးများရဲ့ အခက်အခဲအချို့